Pyae Phyo (MMiTD): April 2013
UnHackMe v5.99 Build 418 + Crack
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေအတွက် စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်အောင် Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါ
တယ်ဗျာ။ Software နာမည်နဲ့တင်ဘဲ စိတ်ဝင်စားသွားကြမှာပါ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမယ့်စက်ထဲမှာ Install
လုပ်ထားရုံနဲ့ မိမိမှာရှိတဲ့ Personal Data တွေ User Name နဲ့ Password တွေ အခိုးမခံရအောင် ကာကွယ်
ပေးနိုင်ပါတယ်။အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Crack File ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
စွဲမက်ဖွယ် မော်ဒယ်လ် လေးများနဲ့ Go Launcher - (Sexy JB GO Launcher EX Theme v2.0 APK For Android)
Sexy JB Go Launcher ကတော့ နာမည်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ဘဲ ဘယ်လို Launcher မျိုးလည်းဆိုတာခန့်
မှန်းလို့ရပါတယ်နော်။ Sexy ဆိုပေမယ့် သရုပ်ပျက် Sexy မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အသက် 18 နှစ်အောက်
လူငယ်များလည်း သဘောကျရင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းကြီး ဆင်ဆာမဲ့တဲ့ ပုံမျိုးမဟုတ်လို့
ကျွန်တော်တင်ပေးတာပါ။ ပြည့်ဖြိုး ဆိုဒ်မှာလည်း ဆင်ဆာ ကန့်သတ်ထားပါတယ်ဗျာ။ဟဲဟဲဟဲ။..............
Icon တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘေးနားမှာ ညို့စွဲအားရှင်မိန်းမချောလေးများက စတိုင်အလန်းလေးတွေနဲ့ပို့စ် ပေးနေ
တာပါ။ Icon ဒီဇိုင်းတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ Wallpaper , Widget , Locker , အားလုံးအားလုံးဟာ စွဲဆောင်မှု
အပြည့်နဲ့ပါ။ အလန်းဇယားလေးနော်အောက်မှာ အမြည်းသဘောအနဲ့ Screen Shoot ရိုက်ပြီးတင်ပေးလိုက်
Sexy JB GO Launcher EX Theme v2.0 play.google.com.metro.sexy.hd
Jellybean Sexy system icons!
အမျိုးအစား: Android , Android Application , Android Theme , Theme
Bladeslinger Full Version 1.4 APK For Android Game
ထပ်လာပြန်ပြီဗျာ Android HD Game ကြီးတစ်ခု။ အခုနောက်ပိုင်း Android HD Game အလန်းကြီး တွေကို
တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံးတစ်ခုလောက်တင်ပေးသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဗျာ။ အခုတစ်ခါမှာလည်း
ဇတ်လမ်းသွားနဲ့ တိုက်ခိုက်ရတဲ့ Game ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သတ္တ၀ါဆန်းတွေကို လူစွမ်းကောင်း
မင်းသားက လိုက်လံရှင်းလင်းသုတ်သင်ရတဲ့ Game ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခန်းတွေအများကြီးနဲ့ ထမင်းမေ့
ဟင်းမေ့ကစားရတဲ့ Game တစ်ခုပါဗျာ။ အမြည်းသဘောအနေနဲ့ Screen Shoot ရိုက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါ
တယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်မှာသာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Required android: 2.3 and up (ARMv7)
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၂၉.၄.၁၃) အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၁၆)
နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ အပတ်စဉ်တင်သွားပေးပါ့ မယ်ဗျာ။နောက်အပတ်များမှာလည်း အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်ဗျာ။ အခုအပတ်မှာ Internet Journal အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၁၆) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ April-29 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဂျာနယ်ကို ၀ယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-100 (29.4.13)
နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ အပတ်စဉ်တင်သွားပေးပါ့ မယ်ဗျာ။နောက်အပတ်များမှာလည်း အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်ဗျာ။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-100 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ April-29 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဂျာနယ်ကို ၀ယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
BattleField2Bad Company Full Version 1.28 APK For Android
စစ်တိုက်ရတာ ၀ါသနာပါသူများအတွက် Android Phone မှာ ကစားနိုင်တဲ့ HD Game လေးတစ်ခုတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု တိုက်နေရသလိုမျိုး အဆင့်ဆွေအဆင့်တွေနဲ့ အခန်းတွေအများကြီး
ကစားရမှာပါ။ PS3 နဲ့ PC Game မှာတော့ နာမည်ရပြီးသား လူကြိုက်များတဲ့ Game တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အခုအချိန်မှာတော့ Android ခေတ်ဖြစ်နေတော့ Android OS အတွက် ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ရုပ်
ထွက်ကတော့ လုံးဝကို ရှယ်နော်။ Screen Shoot တွေတင်ပေးထားတာတွေ့တဲ့အတိုင်းပါဘဲဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်မှာသာ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Battlefield: Bad Company2is developed by EA DICEafirst-person shooter, before the Xbox 360, PS3, PC version. Has now been published in the the Android platform! As developed by EA DICE, paragraph 9, "Battlefield" series of work, it is
PC version of Battlefield: Bad Company, "the sequel, on the basis of inheritance before the feature, enhanced online multiplayer battle elements and teamwork setting. The game uses an enhanced version of frost engine, adding support building frame damage and objects block destruction.
The players in the game to continue to play the role of Preston the Ma Luowei (Preston Marlowe), "B company, namely" Bad Company ", expandanew adventure. At this point, the B company of soldiers rejoin, which means that they can use their own army providesavariety of support, do not have to search around, looting supplies. Direct touch-screen operation is very free, whether it is to aim and shoot, squat or throwing grenades, are very smooth and natural. Driving operation of the various armed units are also satisfactory. The game's mission design also receivedagood evaluation, there will be 14 different missions in the single-player campaign, each task will have different goals. At the same time the environment will jungle, snow, desert and indoor the diversity game becomes more playable.
The game will have up to 14 single-player missions across five different regions will be in the jungle, desert and snow ...
Battlefield across five different Battlefield regional and 14 single-player missions;
A variety of weapons and vehicles available for use;
Fine game graphical interface;
Ace Translator 10.5.3.861 (ဘာသာစကား 65 မျိုးကို မှန်ကန်သော အသံထွက်နှင့် Translate လုပ်ပေးနိုင်သည်။)
ဘာသာစကား 65မျိုးကို အပြန်အလှန်ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ Ace Translator v10.5 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
စာသားအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး အသံထွက်ကိုမှန်ကန်ပီသစွာ ထွက်ဆိုပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
အသံထွက်ကတော့ ဘာသာစကား 43 မျိုးကို အသံထွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်နိုင်ငံက ဘာသာစကား
တွေလည်းဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အသံပါထွက်ဆိုနိုင်တဲ့ ဘာသာစကားကို
တော့ ဘေးနားမှာ Sound Icon လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Patch File ကို
ပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ File Size 2.2MB လောက်ဘဲရှိပြီး အသုံးဝင်တဲ့အတွက် တွေ့တုန်းလေးယူ
အမျိုးအစား: Software , Translator
▼ April ( 183 )
Bladeslinger Full Version 1.4 APK For Android Game...
BattleField2Bad Company Full Version 1.28 APK Fo...
အောက်ပါတို့ကို မှန်/ မှားဖြေဆိုပါ။(20မှတ်) အမှတ်ပြ...
Android Phone မှာ Photo တွေကို အမျိုးမျိုးအလှဆင်ပေ...
Cyberlink Power DVD Ultra 3D v13.0.2720.57 Retail ...
184 mobile games, Nokia, Motarola, Samsung, 3G, So...
Gemeloft java games for symbian os 60v5
Java Games Nokia 240x320
Nokia N8,E7,C7,C6-01 Symbian^3(OS 9.5) HD Touch Ga...
Kaspersky Password Manager 5.0.0.174 + Serial
KBZ Bank APK For Android (ဆောင်ထားသင့်သည်)
360Amigo System Speedup Pro 1.2.1.8200 Full with k...
BlazePhoto Professional 2.6.0.0 Full with Crack/Ke...
Proxy Switcher Pro 5.7.0.6366 Full with Crack
XYplorer 12.30.0200 Full With Keygen + Portable
Foxit PhantomPDF Business 6.0.2.0413 Full Version ...
ကမ္ဘာ့အသိမှတ်ပြုလူသားတစ်ဦးအတွက် သမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ စ...
Internet Download Manager 6.15 Build 8 (5MB )
Smart Applock (3.0.2) Full APK Fro Android
ProKey Lock v2.2 + Crack
Thomas’ Calculus Early Transcendentals 12th Editio...
ကြက် ပင်လယ်ဓါးပြ Crazy Chicken Pirates Game
Epic TD2- Wind Spells Deluxe v1.0.2 APK
FL Studio HD 2.1 api
N.O.V.A.3– Near Orbit Vanguard Alliance v1.0.5 A...
Network Security Auditor 2.6.2 + Patch
Tango Latest Version for andriod
Norton Antivirus & Security Full v2.5.0.404
Galaxy Note N7000 ကို Android 4.2.2 ParanoidAndroi...
Squid: The Definitive Guide (Definitive Guides) [K...
O'Reilly - HTTP - The Definitive Guide
Hardware Hacking Have Fun While Voiding Your Warra...
Password Depot Professional 7.0.3
ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းကို အဝေးက Message ပို့ပြီး စီမံန...
Uninstall Tool 3.3.0 Build 5305 Corporate
Linux server hacks ebook
Frozen Keyboard Pro v0.4.2 (Latest Version)
All Premium Accounts , Premium Cookies, Premium Ja...
Monopoly 2012 full for pc game
Windows7Manager v4.2.5
Full Screen Caller ID Pro v9.5.2 APK For Android O...
ESET NOD32 Antivirus6v6.0.316 x 64bit + Activato...
ESET NOD32 Antivirus6v6.0.316 x 32bit + Activat...
Fast Burst Camera v4.2.1 APK For Android OS
Anti Deep Freeze v0.4 (Deep Freeze Password Remove...
Real Boxing™ v1.0 APK Game Fro Android OS
PaperScan Professional 1.8.0.5
EximiousSoft GIF Creator 7.15 Full Version With se...
AV Uninstall Tools Pack v 2013.03 Full Version ( 1...
Nsasoft SpotAuditor 4.5.8 Latest Full Version
NeoPaint 5.0.2 Final Full Version with Regkey/Crac...
kali linux မှာ google chrome ကိုသွင်းနည်း
Kali linux မှာ Adobe Flash Player ကိုသွင်းနည်းပါ။